Xubnaha gudiga doorashada ee Puntland oo la dhamaystiray - SomaliNet Forums
Postby FBISOMALIA » Sat Jul 02, 2011 11:04 pm
Gudoomiyaha baarlamaanka ee Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi ayaa maanta magacaabay afar xubnood oo qayb ka noqonaysa sagaalka xubnood ee uu ka koobnaanayo gudiga doorashada Puntland oo uu dhowaan 5-ka mid ah uu soo magacaabay madaxwaynaha Dowladda Puntland.
Xubnaha uu magacaabay gudoomiyaha baarlamaanka ee Puntland ayaa waxa ay kala yihiin:
1-Dr.Cali Cabdiraxmaan Xirsi
2-Yuusuf Xaaji Saciid
3-Maxamuud Soofe Xasan
4-Cabdirisaaq Axmed Shiikh Shoolaa.
Madaxwaynaha dowladda Puntland ayaa 28-kii June ee bishan magacaabay shan xubnood oo qaybka ah gudiga doorashada ee Puntland,waxaana xubnihii ugu dambeeyay ee uu magacaabay gudoomiyaha baarlamaanka ee Puntland ay dhamaystirayaan tiradii laga filayay gudiga doorashada ee Puntland.
Xeerka gudiga doorashada Puntland oo ay horay u ansixiyeen Golaha wasiirada iyo golaha wakiilada Puntland ayaa qeexaya in gudiga doorashada Puntland inay noqdaan sagaal xubnood oo afar ka mid ah ay soo gudbinayaan golaha baarlamaanka ee Puntland,halka shan xubnood uu dhigayo inuu magacaabo madaxwaynaha Puntland,waxaana uu gudigan uu si rasmi ah uu howshiisa ay bilaabmaysaaa marka ugu horeysa oo ay baarlamaanku ansixiyaan.
Gudiga doorashada ee Puntland ayaa ugogol xaaraya sidii maamulka Puntland uu uga gudbi lahaa nidaamka beelaha,islamarkaana uu u gudbi lahaa nidaamka axsaabta badan.
Re: Xubnaha gudiga doorashada ee Puntland oo la dhamaystiray
Postby FBISOMALIA » Sat Jul 02, 2011 11:05 pm
now its finish good work MR.president
Faroole oo Magacaabay Qaar ka Mida Gudiga Doorashada Pland
by FBISOMALIA » Mon Jun 27, 2011 12:25 pm » in Politics - Puntland
Gudiga Baahinta Puntland oo soo Bandhigay Waxqabadkoodii
by FBISOMALIA » Tue Aug 16, 2011 8:32 am » in Politics - Puntland
Garoowe:Gudiga Amniga Puntland oo shir deg deg ah qaatay
by FBISOMALIA » Tue May 31, 2011 2:58 pm » in Politics - Puntland
DHAQANKA CUSUB EE DOORASHADA PUNTLAND
by afisoone » Wed Nov 20, 2013 1:51 pm » in Politics - Puntland
Guddiga doorashada Puntland oo doortey Guddomiye
by FBISOMALIA » Sun Jul 17, 2011 11:03 am » in Politics - Puntland
by kaliil » Fri Feb 10, 2017 3:11 am » in Politics - Somaliland
Xubnaha Baarlamaanka Galmudug
by CaliQase » Sat Jun 20, 2015 5:22 pm » in Galmudug
by Gladys2020 View the latest post
Fri Jul 03, 2020 8:11 am